ZTE dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy vaovao, Blade V8 Mini ary Lite mora vidy kokoa ao amin'ny MWC 2017 | Androidsis
ZTE dia nanomboka tamin'ny 2017 somary "sahirana" tamin'ny finday avo lenta avy amin'ny andiany Blade. Nandritra ny CES farany natao tany Las Vegas natao, toy ny isan-taona, tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary, natolotr'i ZTE ny smartphone Blade V8 Pro vaovao, fitaovana iray, na dia eo aza ny anarany "pro", dia lafo, ary ao anatin'izany ny fakantsary miisa 13 megapixel. Roa andro monja taorian'io hetsika io dia nanambara ny orinasa Blade V8 (tsy misy anaram-bosotra Pro), izay mbola manolotra marimaritra iraisana eo anelanelany.
Ankehitriny, ao anatin'ny sehatry ny Mobile World Congress 2017 izay mahatonga an'i Barcelona ho renivohitry ny teknolojia finday, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy i ZTE smartphone roa vaovao, mora kokoa aza, ary izany dia mizatra amin'ny Android 7.0 Nougat. Resaka finday rehetra no resahina Blade V8 Mini sy Blade V8 Lite nataon'i ZTE.
1 ZTE miloka amin'ny kalitao amin'ny vidiny ao anatin'ny andiany Blade
ZTE miloka amin'ny kalitao amin'ny vidiny ao anatin'ny andiany Blade
Anisan'ireo fitaovana finday roa natolotr'i ZTE tamin'ny Mobile World Congress 2017, ny fitaovana avo lenta dia mifanaraka amin'ny ZTE Blade V8 Mini, izay tena hitanao amin'ny sary lohateny izay maneho an'ity lahatsoratra ity.
Araka ny hitantsika, ny terminal vaovao dia manolotra a famolavolana unibody metaly, na dia mety ho ny mampiavaka an'i V8 Mini aza dia manolotra a Fakan-tsary roa 13 sy 2MP tsirairay avy ao an-damosiny. Ireo fakan-tsary ireo koa dia manohana a Fomba fitifirana 3D, izay ahafahan'ny sensor mahatsapa sary avy amin'ny zoro samihafa ary manambatra azy ireo hiteraka sary 3D. Ankoatr'izay, ny fitaovana dia miaraka amin'ny fanaraha-maso fakan-tsary ary HDR auto.
Ny ZTE V8 Mini dia manasongadina a Efijery 5.0 inch, processeur Qualcomm Snapdragon 435, 2GB an'ny RAM, 16GB fitehirizana fampahatsiahivana mitambatra sy azo ovaina noho ny slot karatra micro SD azy, a Fakan-tsary eo aloha 5MP ary a Batterie 2.800mAh tsy azo esorina.
Ankoatr'izay dia manana mpamaky dian-tànana ao ambadiky ny terminal izy, izay hahafahan'ny mpampiasa manomboka ny fampiharana tiany indrindra rehefa maty na mihidy ny efijery.
Mikasika ny rafitra fiasa, araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, ny ZTE V8 Mini dia ho tonga amin'ireo mpividy miaraka amin'ny Android 7.0 Nougat ho fenitra ary ny sosona fanaingoana marika MiFavor 4.2.
Hanangana ny smartphone V8 Mini amin'ny voalohany ny orinasa ZTE amin'ny tsena isan-karazany any amin'ny faritra Azia-Pasifika sy any Eropa, fa ny antsipiriany momba ny vidiny sy ny daty misy azy ireo dia mbola tsy nambara.
Saingy tsy io ihany no fitaovana natolotry ny orinasa ZTE androany tao amin'ny Mobile World Congress 2017. Araka ny efa nampoizinay teo am-piandohana, ny orinasa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny ZTE Blade V8 Lite ho an'izao tontolo izao fa azonao jerena etsy ambony ihany tsipika.
Ity smartphone vaovao ity dia aseho amin'ny vatana vita amin'ny metaly sy efijery lehibe iray izay refy no misy azy 5.0 santimetatra. Ao anatiny no misy ny mpanera Octa-core MediaTek 6750 Ary, toy ny ZTE Blade V8 Mini, dia misy fenony ihany koa Android 7.0 Nougat amin'ny maha rafitra miasa "namboarina" an'ny kinova 4.2 an'ny MiFavor, ny zTE fanaingoana manokana an'ny ZTE.
Ho fanampin'izany, manolotra a Fakan-tsary 8MP any aoriana ary fakan-tsary 5MP eo alohaary koa a mpamaky fanondro izay efa nitaingina ny vodiny koa.
Ny Blade V8 Lite dia homena ny mpanjifa any Italia, Alemana ary Espana tamin'ny onja fandefasana voalohany. Aorian'izay dia hitarina amin'ny tsena marobe any amin'ny faritra Azia-Pasifika sy Eoropeana ny fisian'izany.
Amin'ity tranga ity ihany koa ny orinasa dia tsy nanambara ny vidin'ny Blade V8 Lite na ny daty fandefasana azy manokana amin'ny tsena nambara, fa hampahafantarinay anao amin'ny Androidsis raha vantany vao fantatray izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE dia mamoaka amin'ny fomba ofisialy vaovao, Blade V8 Mini ary Lite mora vidy kokoa ao amin'ny MWC 2017